December 12 ~ विज्ञान संसार
विश्वमा २ हजार ७ सय प्रकारका लामखुट्टेहरु पाइन्छन् । लामखुट्टेहरुले स्तनपायी जन्तुको रगत पिउँछन् । तर जुनसुकै प्रकारको लामखुट्ट भए पनि भाले लामखुट्टेले रगत पिउँदैन । पोथी लामखुट्टेले मात्र रगत पिउँछ । यस्तो किन - एक पोथी लामखुट्टेले आफ्नो छोटो जीवनकालमा करिब २ हजारभन्दा बढी बच्चा जन्माउन अण्डा पार्छ । दुर्इ हजारभन्दा बढी अण्डालाई परिपक्व बनाउन पोथी लामखुट्टेलाई प्रचुर प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ, जुन त्यसको शरीरमा हुँदैन । त्यसैले प्रोटिनका लागि पोथी लामखुट्टेले स्तनपायी जन्तुको रगत पिउँछ । प्रत्येक पटक अण्डा पार्नुपूर्व पोथी लामखुट्टेले भरपुर रगत पिउँछ । रगत पिउनको लागि पोथी लामखुट्टेको टाउकोमा मसिनो पाइप हुन्छ जसलाई त्यसले स्तनपायी जन्तुको शरीरमा रहेको रक्तनलीभित्र घुर्साई रगत तान्दछ । पोथी लामखुट्टेले स्तनपायी जन्तुको शरीरबाट आफ्नो तौलको अढाइ तीन गुणा बढी तौलको रगत तान्दछ ।
Posted by Unknown On 10:23 PM
Posted by Unknown On 5:18 AM
⁯चिसो मौसममा हाम्रो छालामा रहेका रौँहरू ठाडा हुन्छन् । यसलाई हामी
काँडा उम्रेको भन्छौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो नियन्त्रण बिना नै हुने गर्छ
। चिसोबाट बच्नका लागि जनावरहरूका शरीरमा बाक्ला रौँ हुन्छन् । यसले
तिनीहरूलाई चिसो हुनबाट जोगाउँछ । जाडोबाट जोगाउने सबैभन्दा भरपर्दो
वस्तु भनेकै रौँ हो तर हाम्रो शरीरमा त साना रौँ मात्र हुन्छन् । यसले
हाम्रो शरीरलाई ढाक्न सक्दैन । त्यसैले हामीलाई चिसो भएको बेला अन्य
भागहरूलाई ढाक्नका लागि यिनीहरू ठाडा हुन्छन् । यो प्रक्रिया प्राकृतिक
नै हुने हुँदा यसमा डराउनु पर्दैन , यसले कुनै हानी गर्दैन ।⁮
Posted by Unknown On 4:56 AM
Posted by Unknown On 4:01 AM
सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा अदभुत र विलक्षणको चीज हो मस्तिष्क । आकारमा सानो तर काम भने ब्रहृमाण्ड(Universe)को नै समेत खोतलखातल गर्न सक्ने । आजसम्म जे जति प्रगति र उन्नति भएका छन् , ती सबै मानवका विकसित मस्तिष्ककै कमाल हुन् । मानिसको मस्तिष्क विकसित नभएको भए सम्भवतः आज हामीले देखि - भोगिरहेका प्रगति र उन्नतिहरू नै सम्भव हुने थिएन । सबैमा जान्ने इच्छा हुनसक्छ, यस्तो विलक्षणको मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा ।
वास्तवमा मस्तिष्कले स्नायु -नशा हरूले ल्याएका सूचनाहरूलाई ग्रहण र प्रशोधन गरेर काम गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो मस्तिष्कमा करिब १४ अरब जति कोषहरू र लाखौं स्नायु सञ्जालहरू (Nerve Fiberes) हुन्छन् । शरीरका विभिन्न भागहरूका सूचनालाई मस्तिष्कसम्म ल्याइपुर्‍याउने जिम्मेवारी बोकेका ती स्नायुहरूले ल्याएको सूचनालाई मस्तिकको एउटा खास भागले विश्लेषण र व्याख्या गर्छ र आवश्यकताअनुसार मस्तिष्ककै विभिन्न भागहरूमा पठाउने काम गर्छ । ती भागहरूबाट मस्तिष्कले विश्लेषण र व्याख्या गरेका ती सूचनाहरू शरीरका विभिन्न भागहरूमा पुग्ने गर्छ । फलतः हामी विभिन्न खालका क्रियाकलाप र अनुभवहरू गर्न पुग्दछौं ।
हाम्रो टाउकोको हड्डीको ठीक मुन्तिर मस्तिष्क रहेको हुन्छ । मस्तिष्कको बाहिरी भागलाई कोर्टेक्स (Cortex) भनिन्छ । शरीरका थुप्रै अङ्गका कोषहरू मरेपछि नयाँ कोषले बदलिने गर्छ तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार मस्तिष्कको कोष चाहिँ मरेपछि बदलिँदैन । सम्भवतः यही कारण हुनसक्छ, वृद्धावस्थातिर लाग्दै जाँदा हाम्रो मस्तिष्कको क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ । हेक्का रहोस्, मस्तिष्कको दाहिने भागले शरीरको बायाँ भाग र देब्रे भागले शरीरको दाहिने भागलाई नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने काम गर्छ ।
यो पनि हेर्न नभुल्नुहोस्
मस्तिस्क सम्बन्धी रोचक तथ्य (Fantastic Facta About Brain)
घामबाट अचानक अँध्यारोमा आउँदा आँखा राम्रो सँग देख्न सकिदैन , किन ?
हाम्रो आँखाले उज्यालो र अँध्यारो दुवै ठाँउमा देख्न सक्छ । तर प्रकासको
चमक अनुसार आँखाको नानी ठूलो र सानो हुन जरूरी हुन्छ । अँध्यारो ठाउँमा
आँखाको नानी ठूलो हुन्छ ता की बढीभन्दा बढी प्रकाश छिरोस् । त्यसको ठिक
बिपरीत उज्यालो ठाउँमा आँखाको नानी सानो हुन्छ । जब हामी अचानक घामबाट
अँध्यारो ठाउँमा जान्छौँ, आँखको नानी सानो हुन केही समय लाग्छ, जसको कारण
आँखा राम्रोसँग देख्न पनि केही समय लाग्छ ।
Posted by Unknown On 11:53 PM
तपाईं हामीले देखिरहेकै कुरा हो, डाक्टरले बिरामीको जाँच गर्दा मुटुको चाल पनि नाप्ने गर्छ । विशेष गरेर हातको नाडी छामेर डाक्टरले मुटुको गति जाँचिरहेको हुन्छ । मुटुको गतिबाट पनि मानिस स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । स्वभाविक रूपमा जिज्ञासा उठ्न सक्छ, स्वस्थ मानिसको मुटुको गति चाहिँ कति हुनुपर्छ ? यसको उत्तर यति नै भनेर भन्न गाह्रो छ । किनभने यो मानिसपिच्छे फरक पर्न सक्छ । त्यसै गरी मानिसको उमेर , उनको शरीरको अवस्था, उसले गरेका क्रियाकलाप, उसको मानसिक अवस्था लगायतका पक्षहरूमा पनि यो कुरा निर्भर गर्दछ । सामान्यतः एक मिनेटमा ७२ देखि ८० सम्म मुटुको गतिलाई सामान्य मान्ने गरिन्छ । अझ पुरूषहरूमा प्रतिमिनेट ७० र महिलाहरूमा ७५ प्रतिमिनेटलाई मुटुको औसत चाल निर्धारण गरिएको छ । मानिसपिच्छे मुटुको चाल फरक हुने भएकोले प्रतिमिनेट ६० देखि १०० सम्मको मुटुको चाललाई अवस्था हेरी सामान्य मान्ने गरिन्छ ।
हामी चलखेल गरेको अवस्थामा भन्दा सामान्य अवस्थामा रहँदा मुटुको गति कम भएको हुन्छ । शारीरिक श्रम हुने काम वा खेलकूद गर्दा स्वभाविक रूपमा मुटुको गति निक्कै तेज हुने गर्छ । तर केही समयको विश्रामपछि त्यो पूर्ववतः सामान्य अवस्थामा आइपुग्छ । उमेरअनुसार मानिसको मुटुको चाल पनि फरक फरक हुने गर्छ । भर्खरै जन्मेको बच्चाको मुटुको गति प्रतिमिनेट १३० देखि १५० सम्म हुन्छ । त्यसै गरी शिशु अवस्थामा प्रतिमिनेट १०० देखि १३० र अलि हुर्केको बच्चाको मुटुको चाल प्रतिमिनेट ९० देखि ११० सम्म हुने गर्छ । किशोरावस्थामा मुटुको चाल प्रतिमिनेट ८० देखि १०० सम्म हुने गर्छ । वृद्धावस्थामा वा ६० नाघेका मानिसहरूमा पनि मुटुको चाल निक्कै तीव्र हुने गर्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार सो उमेर समूहमा प्रतिमिनेट ८० देखि १२० सम्म पनि हुने गर्छ । रमाइलो कुरा के छ भने सामान्य अवस्थामा खेलाडीहरूको मुटुको गति औसतभन्दा कम हुने गर्छ । त्यसै गरी विभिन्न खाले औषधिका कारण पनि कतिपय औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिहरूको मुटुको चाल औसतभन्दा कम हुनसक्छ ।
औसत रूपमा मानिसको मुटुको गतिलाई प्रतिमिनेट ७५ मान्ने हो भने एक घण्टामा यो ४५०० पटक धड्कन्छ । त्यसै गरी एक दिनमा १०८ ,००० पटक र एक वर्षमा करीब ३९,४२०,००० पटक धड्कने गर्छ ।
Posted by Unknown On 4:39 AM
Posted by Unknown On 1:07 AM
Posted by Unknown On 12:37 AM
हामिले देखि आएकै कुरा हो कि आगो सधै माथीतर्फ फर्कन्छ, यसो किन हुन्छ ?
आगो बाल्दा आगोको तापको कारण त्यस वरिपरिको हावा पनि तातो हुन्छ । तातो हावा हलुको हुनेहुदा माथितर्फ वहन थाल्छ । उसले आफ्नो साथमा आगोलाई पनि माथितर्फ तानि लैजान्छ । यसै कारण आगो सधै माथितर्फ फर्कन्छ ।